Hihaona amin'ny Lila HD lohahevitra kisary tsotra | Avy amin'ny Linux
Mitohy amin'ny fandraisana anjara hanatsarana ny fisehoan'ny fizarana Linux anay, manome anao lohahevitra kisary vaovao izahay, izay manana famaranana matihanina tsara ary azo ampiarahana amin'ireo lohahevitra sy tontolo manodidina ny birao.
Ity lohahevitra kisary tsotra nefa tsara tarehy ity izay mandeha amin'ny anarany Lohahevitry ny Lilac HD, dia manana ny mampiavaka azy tsara izay aseho amin'ny endriny mahafinaritra 5 ny sariny, izay manome antsika ny fahalalahana hanambatra fonosana kisarisary mitovy amin'ny fomba fahita samihafa.
1 Inona ny lohahevitra kisary Lila HD?
2 Ahoana ny fametrahana lohahevitra kisary Lila HD
Inona ny lohahevitra kisary Lila HD?
Lohahevitry ny Lilac HD Is a lohahevitra kisary maimaim-poana ho an'ny linux, noforonin'i Cristian Pozzessere ary izany dia nahazo fanatsarana vitsivitsy noho ny fiaraha-miasa tamin'ny Valerio Pizzi.
Ity lohahevitra tsara tarehy ity dia zaraina amin'ny alàlan'ny alokaloka 5 hafa, miaraka amin'ireo sary famantarana amin'ireo disro sy fampiharana be mpampiasa indrindra, manampy sary famantarana ny serivisy, sokajy, hetsiky ny rafitra, mymetypes amin'ny hafa, mitandrina ny firindrana sy ny tsipika famoronana madio.
Amin'ity horonantsary noforonin'ny mpamorona azy ity dia azontsika atao ny mankasitraka amin'ny antsipiriany ny toetra mampiavaka an'io fonosana kisary tsara io, izay hamela mihoatra ny iray ny vavany misokatra.
Ahoana ny fametrahana lohahevitra kisary Lila HD
Raha hametraka lohahevitra kisary Lila HD amin'ny distro rehetra dia tsy maintsy manaraka ireto dingana manaraka ireto isika, manokatra terminal ary mihazakazaka ny baiko ilaina amin'ny asa tsirairay, tsy maintsy atao ho faka na sudo izy ireo.
Esory ny lohahevitra kisary Lila HD kinova taloha:
rm -rf / usr / mizara / sary / Lila_HD rm -rf / usr / mizara / sary / Lila_HD_Blue rm -rf / usr / mizara / sary / Lila_HD_Dark rm -rf / usr / mizara / sary / Lila_HD_Green rm -rf / usr / mizara / kisary / Lila_HD_Kaki
Clone ny repository lohahevitra ofisialy:
Adikao ny lahatahiry lohahevitra Lila HD ho an'ny lahatahiry kisary distro anao:
cp -r Lila-HD-icon-theme / Lila_HD / usr / fizarana / kisary / Lila-HD-kisary-lohahevitra / Lila_HD_Blue / usr / fizarana / kisary / cp-Lila-HD-kisary-lohahevitra / Lila_HD_Dark / usr / fizarana / sary / cp -r Lila-HD-icon-lohahevitra / Lila_HD_Green / usr / fizarana / sary / cp-Lila-HD-kisary-lohahevitra / Lila_HD_Kaki / usr / fizarana / sary /
Mamelombelona ny cache cache:
Fafao ny fampirimana loha-hevitra Lila HD izay nosintominay.
Ampandehano ny sary masina avy amin'ny safidinao fitantanana ny distro.
Manantena izahay fa ankafizinao ity fonosana sary mahafinaritra ity izay efa nosedraina tao amin'ny Ubuntu sy Antergos miaraka amin'ny Gnome, XFCE, Cinnamon, Mate ary Plasma fa tokony hiasa amin'ny distro Linux rehetra izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Hihaona amin'ny Lila HD lohahevitra kisary tsotra
Tena tsara izy ireo ary koa miala kely amin'ny fironana farany satria saika mitovy amin'ny endrika Design Material daholo izy rehetra.
Cristian Pozzessere dia hoy izy:
Misaotra anao lahatsoratra tsara.
Nanisy kisary sy fampirimana vaovao ao amin'ny relase 3.0 vaovao.
Raha tianao ity lohahevitra kisary ity dia havaozy azafady.
Asa tsara ho an'ny tranonkalanao.
Valiny tamin'i Cristian Pozzessere